muscleprofessor: December 2015arial" action="like" colorscheme="light">
အောက်ပိုင်းထိုင်ခြင်းကိုဘာကြောင့်ကစားသူတော်တော်များများရှောင်ကြသလဲ။မေးလိုက်ရင်အဖြေကအမျိုးမျိုးထွကမလာပါမယ်။တစ်ရက်ထိုင်ပြီးရင် ၃ရက်လောက်နေရထိုင်ရမသက်သာဘူး အောက်ပိုင်းကို ကစားပြီးရင် အထိုင်အထမကောင်းဘူး အရမ်းပင်ပန်းတယ် နေ့တိုင်းလမ်းလျောက်နေရတာ ကစားဖို့လိုမယ်မထင်ဘူးအစရှိသဖြင့် ခံယူချက်အမျိုးမျိုး ဆင်ခြေဆင်လက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ယနေ့အချိန်ထိ Gymလောကမှာ ၁၀ယောက်မှာ ၇ယောက်လောက်အတွက် အောက်ပိုင်းထိုင်ခြင်းကို အရေးမပါတဲ့ အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ရှောင်ကျဉ်ထားကြတယ်။ကောင်းပြီ အောက်ပိုင်းမထိုင်တော့ပဲ အပေါ်ချည်းဘဲ ကစားနေပါပြီတဲ့ ပြည့်စုံလှပနိုင်ပါ့မလား။Chicken leg ဆိုတဲ့စကားလုံးလှလှလေးကို မက်မောတမ်းတနေမယ် ဆိုရင်တော့ အောက်ပိုင်းကစားခြင်းကို ဝေးဝေးမှာထားလိုက်ပါ။ထို့အတူ သင်ရဲ့ ပြည့်စုံလှပမှုကလည်း ခပ်ဝေးဝေးမှာ ကျန်ခဲ့ပါပြီ။ရှေ့တင်မှာတော့ သင့်ကို အပေါ်ပိုင်းကစားထားတာလှ တယ် အားကျတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလှလှလေးတွေဟာ သင့်ကိုချီးမွမ်းသူရဲ့ မျက်လွာတစ်ချက် သင့်အောက်ပိုင်းကြွက်သားကို ရောက်သွားချိန်မှာတော့ သင့်ကို စိတ်ထဲက နေ Chicken leg တစ်စုံ ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ သူဆိုတာ ထုတ်မပြောရင်သာရှိပါမယ်။နောက်ကွယ်မှာ ပါးစပ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေမှာ မလွဲသေချာပါ။ သြစလျေးလျ ဝက်သစ်ချပင်ကြီးလို့ခေါ်ဆိုနေကြတဲ့ အာနိုးဆိုရင်လည်း သူရဲ့ အစော ပိုင်းကာလမှာ အောက်ပိုင်းကြွက်သားသိသိသာသာ အားနည်းခဲ့တယ် ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံမယ်ဆိုရင်တောင် ရေထဲဆင်းပြီး ကိုယ်တစ်ပိုင်းပြကွက်တွေနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တယ် နောက်ပိုင်း သူလေးစားအားကျတဲ့ သူနဲ့ Body type တူတယ်လို့လက်ခံထားကျတဲ့ အာနိုးကို အနီးကပ်အကြံဥာဏ်တွေပေးတဲ့ ရက်ပက်ခ် ရဲ့ အိမ်ကို ထမင်းစား ဖိတ်လို့သွားချိန်မှာ အာနိုးကို အောက်ပိုင်းကစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြံဥာဏ်တွေ လေ့ကျင့်ဖို့တွန်းအားတွေပေးခဲ့တယ် အာနိုးကိုယ်တိုင်လည်း ရက်ပတ်ခ် ရဲ့ ဖုထစ်ပြန့်ကားနေတဲ့ အောက်ပိုင်းကြွက်သားတွေကို အားကျပြီး သူ့ရဲ့အောက်ပိုင်း ချေမှုန်းရေးစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တယ်။လူကြားထဲကို ဘောင်းဘီတိုနဲ့ လျောက်သွားတယ် လူတွေရဲ့ ကဲ့ရဲ့မှု ဝေဖန်မှု အသံတွေကို နားထဲမှာ စွဲမြဲနေအောင် မှတ်သားတယ်။အဲ့ဒီ အသံတွေကို Gym ကို ယူလာပြီး အလေးပြားတွေနဲ့ တိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ တစ်ပတ် ၂ကြိမ် အကျော့ တွေ အကြိမ်တွေ အများကြီးနဲ့ လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။သူ့ခေတ်သူအခါက အောက်ပိုင်းကစားချိန်မှာ အာနိုးကို ဘယ်သူမှမမှီအောင် ပြင်းပြင်း ထန်ထန်ကစားခဲ့တယ်။အကယ်၍များ အာနိုးတစ်ယောက် Chicken leg တစ်စုံက်ု ဒီအတိုင်းပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့ကစားနေလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ယနေ့သိနေတဲ့ ၇ထပ်ကွမ်းအိုလံပီယာ အပါအဝင် အခြားဆုတွေ သူ့အတွက်ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။သူတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး ကာယဗလက်ုလုံးဝစိတ်မဝင်စားတဲ့ ဘောလုံးခရေဇီ လီဟေနီတစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ်။အထက်တန်းကျောင်းသား ဘဝမှာ ဘောလုံးက်ု သဲသဲမဲမဲ ကစားခဲ့တယ် ခြေကျိုးပေါင်ကျိုး ဘဝနဲ့ အနားယူတယ်။Gymကစားတယ် ပြိုင်ပွဲတက်ယှဉ်ပြိုင်ရာကနေ bodybuilding ကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်လာချိန်မှာ ကာယဗလလောကမှာ အသံတွေထွက်လာပါတယ် လီဟေနီရဲ့ အောက်ပိုင်း တစ်စုံဟာ အမြင်မလှဘူး သိသိသာသာအားနည်းနေတယ်။လီဟေနီ ဘာလုပ်သလဲ အချိန်မှီပြန်ပြီးပြင်တယ် အားစိုက်တယ် Gymထဲမှာ ချွေးနဲ့ပေးဆပ်တယ်။၈ထပ်ကွမ်းဆိုတဲ့ မောင်အိုလံပီယာဆုကို ကာယဗလသမိုင်းမှာ မော်ကွန်းထိုးနိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့လို ပြိုင်ပွဲဝင် ကမ္ဘာ့အဆင့် တွေတောင် အောက်ပိုင်းအားနည်းချက်တွေကို
အချိန်မှီပြန်ပြုပြင်နိုင်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့လို သာမန်ဝါသနာရှင်တွေဆိုတာ အောက်ပိုင်းကို အခြေခံကောင်းကောင်းနဲ့ တည်ဆောက်ထားသင့်တယ် ပုံမှန်လေး အောက်ပိုင်းကစားထားမှ အခွင့်အရေးရလို့ ပြိုင်ပွဲတက်ချိန်မှာ မိမိမှာ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနိုင်မှာပါ ။အပေါ်ပိုင်းကို ဘယ်လောက်ပဲ မာဆယ်တွေကွဲပြဲနေပါစေ တန်းစီရပ်လိုက်ကတည်းက Chicken leg တစ်စုံက်ု အဘယ်အရာကမှ စင်မြင့်ပေါ်မှာ မဖုံးကွယ်နိုင်ပါဘူး။ထို့ကြောင့် Chicken leg တစ်စုံပိုင်ဆိုင်နေပြီလား ဆန်းစစ်ပါ မိမိအတွက် အောက်ပိုင်းနေ့သည် ငရဲခန်းဝင်ရသလို စိတ်မှာခံစားနေရပြီလားအဆိုပါ စိတ်ဓာတ်တွေကို မောင်းထုတ်ပြီး မိမိမျက်လုံးထဲမှာ တွမ်ပလပ်စ် ခရစ်ဒစ်ကာဆင် လီးပရိစ် တို့ကဲ့သို နာမည်ကျော် အောက်ပိုင်းကြွက်သားအကောင်းဆုံးပိုင်ရှင်များ၏ ပေါင်လုံးတွေ ခြေသလုံးတွေကို ပြေးမြင်
လိုက်ပါ။ဒီနေ့ အောက်ပိုင်းကို နက်ဖြန်ရွေ့သည့် အကျင့်ဆိုးများကို ပြုပြင်ပြီးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်သွားလိုက်ပါ။အာနိုးလည်း လူ ကျွန်တော်တို့လည်း လူပါ မတူတာက စိတ်ဓာတ်ခံယုချက်ပါ။မခံချင်စိတ်လေးထားလိုက်ပါ။ အချိန်မ နှောင်းသေးပါဘူး။
တင်ဆက်သူ။ ။အောင်အောင် ( လှိုင်)
Gymလောက၏အလွဲများ အပိုင်း ၁
ကာယဗလလေ့ကျင့်လိုက်စားသူတွေအတွက်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေက်ုတင်ပြရလျင် တစ်ထောင့်တစ် ညပုံပြင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တတ်နိုင်သလောက်တော့အကျဉ်းချုပ်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချို့ကိုတင်ပြ ပေးနေ
တာစာဖတ်သူတိုင်းအသိပါ။တစ်ချို့အချက်အလက်တွေက်ုရေးသားတင်ပြရာမှာ နည်းပြအချို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ကြားမှာ တဇောင်းနဲ့မျက်ချေးဖြစ်စရာကြုံလာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကစားနေသူ လူငယ်အချို့ရဲ့ရင်ဖွင့်သံတွေကိုပြန်လည်ပြီးဝေဖန်ထောက်ရူပြတာပါ။အခုလည်း သတိပြုသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေက်ုထပ်မံတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။နောင်လည်း Gymကစားသူများအတွက် သတိပြုသင့် တဲ့အမှားလေးတွေကိုထပ်မံတင်ပြပေးပါမယ်။သင်လည်း ဂရုမပြုမိတာလေးတွေပါရင် ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီး ဆင်ခြင်ကစားနိုင်ဖို့ စေတနာသဘောနဲ့တင်ပြပေးခြင်းပါ။ဝေဒနာသဘောတစ်ခုမှမပါတာတော့ အသေအချာပါ လ်ုရင်းကို သွားကြပါစ်ု့...
ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆွေးနွေးလိုက်ရင် စာအုပ်တစ်အုပ်စာလောက်ထိ ဋ္ဌီကာချဲ့လို့ရပါတယ်။Gymအများ စုမှာ လူသစ်အများစုအပါအဝင် ကစားသူများလေ့ကျင့်ခန်းနည်းစနစ်တွေမှားယွင်းနေတာအသေအချာ ပါ။ကာယဗလလေ့ကျင့်ခန်းမှာလက်အထားအသို ခြေထောက်အထားအသိုကအစ အသေးစိတ် အရေးပါနေတာ က်ုသိထားသင့်ပါတယ်။နည်းစနစ်မမှန်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာရရှိနိုင်တာတွေက ဒဏ် ရာရရှိမှုလွယ်ကူခြင်း ကြွက်သားထိရောက်မှုမှာ ခုတ်ရာတစ်ခြား ရှရာတစ်ခြားဖြစ်ခြင်း ကိုယ်ခန္ဓာအချိုး အစားမလှပခြင်းတို့ကအသေအချာပါ။နောက်တစ်ချက်က အလေးအများကြီးထည့်ပြီး ပင်ဝါးရုံလေယူ တိမ်းသလို ဘယ်ယိမ်းညာထိုး ရှေထိုး နောက်ယိုင်ကစားနေကြခြင်းပါ။ကာယဗလမှာ အလေးအများကြီး မကစားရဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ကြွက်သားကြီးထွားဖို့ အလေးတိုးကစားရမယ်ဆိုတာ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ မှန်ပါတယ် နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့တိုးပြီးကစားတတ်ဖို့အလေးထားပါ။မိမိထက် စီနီယာကို မယှဉ်ပါနဲ့ မိမိလေ့ကျင့်နေသည်မှာ ကြွက်သားကြီးထွားပြီး အချိုးအစားလှပသော ဘော်ဒီတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ဖို့ပါ။ဘေးလူ အထင်ကြီးအောင် အလေးအများကြီးထည့်ကစားပြီး နည်းစနစ်မမှန်ခြင်းသည် ကာယဗလမှာ အလုပ်မဖြစ်ပါ။မိမိသည်ထိုသို့သော လူစားထဲမှာပါနေပြီလား ဆန်းစစ်ပါ။ပြင်လိုက်ပါ နောက်မကျသေးပါဘူး။
လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုမှာ အစွမ်းကုန်ဆန့်ထုတ်ကစားခြင်းကလည်းအရေးပါတဲ့အချက်တစ်ခုပါ။ပြီးစလွယ်နဲ့ အလေးဘားတန်းကို ဆောင့်ချခြင်း ခပ်မြန်မြန်ဆွဲတင်ခြင်း ညှစ်အားမပါ စူးစိုက်မှုမပါပဲ ခပ်လွယ်လွယ် ပြီးသွားတဲ့ တစ်ကြိမ် တစ်ကျော့မှသည် အကြိမ်ပေါင်း အကျော့ပေါင်းများစွာကြာလာသောအခါ ဒီ Gym ဒီနည်းပြတွေကြောင့် မတိုးတက်တာပါဆိုသည့် အသံများပဲ့တင့်ထပ်လာသည်။မှန်သင့်သလောက်လည်း မှန်ပေသည်။သို့သော်ငြားလည်း နည်းပြဟူသည် နေ့စဉ်နှင့် အမျှ လူများစွာက်ုထိတွေ့နေရသောကြောင့် သင့်တစ်ယောက်တည်းကို နေ့တိုင်းပြောနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။လေ့လာမှတ်သားရမည်မှာသင့်တာဝန်ပင် အမေဘယ်လိုချော့သိပ်သိပ် ကိုယ်တိုင်အိပ်ပျော်အောင်မကြိုးစားရင် အချည်းနှီးပင်။လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု ကိုမခိုမကပ်ပဲ အစွမ်းကုန်ဆန့်ထုတ်ကစားခြင်းသည် ကြွက်သားထိရောက်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးပင် ဖြစ်သည်။
။ကြွက်သားအငယ် minor muscleများကိုအရင်ကစားပြီးမှ major muscle များကိုကစားခြင်းသည် ပိုပင်ပန်းစေသည်။ကြွက်သားငယ်များသည် ကြွက်သားကြီးလေ့ကျင့်ရာတွင် အကူသဘောမျိုးပါဝင်နေ သည်။ထို့ကြောင့် ကြွက်သားငယ်များကိုအရင်ကစားခြင်းသည် ကြိုတင်ပင်ပန်းနေသောကြောင့် ကြွက်သားကြီးလေ့ကျင့်ရာတွင်ထိရောက်သော အင်အားပေးနိုင်စွမ်းမရှိတော့ချေ။ဥပမာပြောရင် နောက်သားကစားပြီးမှ ရင်အုပ်ဘားရှည်တွန်းပြီဆိုရင် သင့်အတွက် ရင်အုပ်သားကစားရာမှာ ထိရောက်မှုမရ်ှတော့ပဲ ပင်ပန်းခက်ခဲနေလိမ့်မည်။ဒါကြောင့် ကြွက်သားအငယ်များဖြစ်သည့် လက်မောင်း ရှေ့နောက် လက်ဖျံ ခြေသလုံးများကို ဦးစွာကစားခြင်းမှရှောင်ရှားပါ။ဒါမှမဟုတ် လက်မောင်း ရှေ့နောက်ကို သီးသန့်တစ်ရက်ကစားပါ။
အကြိမ်တိုင်းကိုဖြည်းဖြည်းထိန်းညှစ်ကစားခြင်းသည်ကြွက်သားအတွင်းသို့သွေးစီးဝင်မှုပိုကောင်းပြီး ကြွက်သားကြီးထွားမှုအတွက်အရေးပါသည့်ဖြစ်စဉ်များကိုများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ ဖြည်းဖြည်းထိန်းကစားခြင်းဖြင့် အရှိန်ပါလူယိမ်းထိုးသည့် အဖြစ်မှကင်းဝေးပြီးအရိုးအဆစ် အရွတ်များအပေါ်ဒဏ်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရာရောက်သည်။အလေးကို ညှစ်ပြီး တွန်းတင် ဆွဲဆန့် ကွေးဆန့် ပြုလုပ်ချိန်တွင် ညှစ်အားအဆုံးမှာ ၂စက္ကန့်လောက်ထိန်းထားသင့်ပါတယ်Positive contraction လို့ခေါ်ပါတယ်။အဆိုပါညှစ်အားကိုပြန်ဖြည်ချိန်မှာ၃စက္ကန့်လောက်အချိန်ယူပြီး ပြန်ဖြည်ချသင့်ပါတယ်။ဒါကို
Negative contraction လို့ခေါ်ပါတယ်။အာနိုးအားကျပြီး ညာဝါးကစားခြင်း ကိုအတုမခိုးပါနဲ့ သင်အဆင့်က အာနိုးမဟုတ်ပါဘူး။cheating method ကိုကစားတယ်ဆိုတာ အမြဲတမ်း မကောင်းပါဘူး အာနိုးအတွက် Cheating ကောင်းပေ့မယ် မအာနိုး သေးတဲ့ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့အဆင့်လောက်ကို cheating မလုပ်ပါနှင့် Good form သာအကောင်းဆုံးပါ။
ကြွက်သားကြီးထွားဖို့ကစားနေချိန်အခြေခံအဆင့်သာသာလောက်ကစားသမားတွေအနေနဲ့ ၁၀ကြိမ် ၃ကျော့လောက်သာအကောင်းဆုံးပါ။အခြေခံအဆင့်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကို ၁၀ကြိမ် ၃ကျော့ဆိုတာ လုံလောက်ပါတယ်။ဒီထက်ပိုတဲ့အကြိမ်ရေအကျော့ရေဆိုတာ over trainingဘက်ကိုရောက်နီုင်ပါတယ်
အခြေခံအဆင့်ထက်ကျော်လွန်ပြီးကြွက်သားထုထည်ကောင်းကောင်းနဲ့တည်ဆောက်ထားပြီးသား သူတစ်ယောက်အတွက်(ပြိုင်ပွဲဝင်)၁၀ကြိမ် ၃ကျော့ထက်ပိုကစားလို့ရကောင်း ရနိုင်ပါတယ်။လေ့ကျင့် မှုလွန်ကဲခြင်းကြောင့် ကာယဗလမှာ ဖွဲမီးလောင်သလို တငွေ့ငွေ့နဲ့တောက်လောက်ခံနေရတဲ့ over training ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေသူတွေဒုနဲ့ဒေးပါ။မိမိကိုယ်ကို ပြန်၍ကောက်ချက်ချလေ့လာကြည့်ပါ တိုးတက်မှုတန့်နေပြီလား ကစားရာမှာငြီးငွေ့လာပြီလား လေ့ကျင့်မှုလွန်ကဲခြင်းလက္ခဏာတွေကို အလွတ်မှတ်ထားပါ။listen to your body ဆိုတဲ့စကားက်ုမမေ့ပါနဲ့။
တင်ဆက်သူ ။ ။အောင်အောင် (လှိုင်
Fitness နှင့် Bodybuilding မှနာမည်ကျော်များ၏အင်တာဗျူးများကိုသင်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန် တော်တို့မသိကျိုးကျွိ့ပြုထားတဲ့အရာ
မယ်။အဘယ်အရာနည်း နာမည်ကျော် Gymတွင် နာမည်ကျော်ကစားနည်းများ နာမည်ကျော် အာဟာရဗေဒပညာရှင်များ နှင့် နာမည်ကျော် စတီးရွိက်ဆေးဝါးသုံးစွဲပြီးလေ့ကျင့်နေသော သူတို့၏ထံပါးတွင် ရှိသောလျို့ဝှက်ချက်သည် ကျွန်တော်တို့ ထံတွင်လည်း ဘုရားသခင်ပေးစွမ်းထားပြီး သားဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် စိတ်စွမ်းအားဆိုသည့်အရာပင်ဖြစ်သည်။ကြွက်သားကြီးထွားအောင်လေ့ ကျင့်ရာတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးပါမှု ( Mental Approach)သည် အရေးကြီးဆုံးပင်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင် တာ မဖြစ်နိုင်တာနောက်မှာထား မိမိလေ့ကျင့်နေသောကြွက်သားကို မိမိစိတ်ထဲတွင် ဖောင်းကြွမောက် တက်လာသည် ဟုခံစားချက်မျိုးထားလိုက်ပါ။ပြီးစလွယ် မတင် ပြန်ချ လေ့ကျင့်မှု၏နောက်ကွယ်တွင် တစ်ကျော့ပြီးသွားသော်လည်း မည့်သည့် ဖီလင်လ်မှမလာချေ။ ကမ္ဘ္ဘာကျော် ကာယဗလမောင်တို့တွင်လည်းမိမိထက်စီနီယာများကိုစိတ်မှာစွဲမြဲလေ့ကျင့်ခဲ့သည်သာဖြစ်သည်။လီဟေနီ
သည် ရော်ဘီရော်ဘင်ဆင် အာနိုးသည် ရက်ပက်ခ် ခရစ်ဒစ်ကာဆင်သည် ဂျွန်ဂရိမက်ခ် ဒိုရီယန်သည် အဲလ်ဘတ်ဘက်ကယ်လ် စသည်ဖြင့်ချရေးပြလျင် မကုန်နိုင်ပေ။မိမိထက်စီနီယာများက်ု တုပကစားဖို့ပြောနေခြင်းလို့သင်မထင်လိုက်ပါနှင့်သူတို့လို လက်မောင်းမျိုး ဗယ်လီသားမျိုး ပေါင်ကြွက်သားတစ်စုံ မိမိလည်းရအောင်လုပ်မည်ဆိုသည့် စိတ်ဓာတ်မျိုးကို ခါချဉ်ကောင်မာန်ဖီသလို မျိုးဖြစ်နေရမည်။အရေးကြီးဆုံးအချက်ကကြွက်သားတွေကြီးထွားဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ရာမှာ ကြီးကို ကြီးရ မယ် ဘယ်နှစ်လနဲ့ဘယ်လောက်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုချမှတ်ပါ။ပြီးပြီဆိုလျင် ခိုင်မာတဲ့စိတ် ဓာတ်နဲ့ အာဟာရဂရုစိုက် လေ့ကျင့်မှုမှန်မှန် နည်းစနစ်ကောင်းကောင်း ဆရာသမားကောင်းကောင်း နဲ့ လေ့ကျင့်လိုက်ပါ အနည်းဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်အဆင့်မရောက်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး။စိတ်ဓာတ်တော့ရှိတယ် လက်တွေ့အကောင်အထည်မဖော်ဘူးဆိုလည်း လွဲနေပါမယ် လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်တာ ကာယဗလမှာ အသုံးမဝင်ပါဘူး။ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကို စိတ်ထဲမှာအမြဲထားပြီး အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ် ဖြစ်လာတဲ့အောင်မြင်မှုမှာ နောက်ထပ်တစ်ဆင့် ရည်မှန်းချက်ထပ်ဆွဲပြီး ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်စွမ်းအားနဲ့ ထပ်ပြီး လေ့ကျင့်မယ်ဆို တစ်ဆင့်ချင်းအောင်မြင်မှုကိုတက်လှမ်းနိုင်မှာ မလွဲသေချာပါ။ကြွက်သားကြီးထွားအောင်လေ့ကျင့်ရာမှာ ထုတင်နေတာပဲ ကစားမယ် စားမယ်များများ ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးလည်း ရှောင်ပါ
။တစ်လမှာကြွက်သားသီးသန့် ပေါင်ဝက်တက်ရမယ်ဆိုတာမျိုး ဒီထက် ပိုပြီး တစ်ပေါင်တက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးချမှတ်ပါ။ထုတင်နေတာပဲဆိုတဲ့ လေးလေးဝါး သီချင်း ကလေးအတွေးလို အဆီတွေအစ်နေအောင်စားပြီး ထုတင်ရင်တော့ တက်လာတော့ တက်လာမယ် ဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့ တက်လာတဲ့ အလေးချိန်မှာ အဆီများများ တက်လာတာတော့ မြေကြီးလက်ခတ် မလွဲပါ။ပြိုင်ပွဲနီးလို့ ထုချပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အရပ်ထဲက စကားပုံလို ကိုယ့်မသာ ကိုယ် ပြန်ထမ်း ရမဲ့ကိန်းဆိုက်ပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပါ။အဆင်မြင့်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေတောင်မှ တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာ ကြွက်သား စစ်စစ် ၇ပေါင်လောက်တက်လာရင်ပျော်နေကြတာပါ။ဒါကြောင့်ထုတင်ချိန်မှာ စားချင်တာစား မယ် အကောင်ကြီးဖို့ပဲတွက်နေတာလေးတွေသတိပြုပါ။ကြွက်သားထုကြီးထွားဖို့လေ့ကျင့်ချိန်မှာ နောက်ထပ် အရေးပါတာ visualisation technique ပါ အာနိုးကောင်းကောင်း အသုံးချခဲ့တဲ့နည်းတစ်ခုပါ။သူပြောခဲ့ တဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်း ပြန်လည်ဖောက်သည်ချရင် ..တွေးထင်မှန်းဆပြီးလေ့ကျင့်နည်းကို အမြဲတမ်း ကျင့်သုံးပါ ။ကိုယ့်စိတ်ထဲကဆန္ဒရှိတာကို တွေးပစ်လိုက်ပါ။ကိုယ်ဟာစိတ်ထဲက ၁၀ပေါင်လောက် ကြွက်သားထုထည်တက်လာတယ် မှန်းမလား မှန်းလိုက်ပါ သင် ပိုက်ဆံပေးရတဲ့အလုပ်မှမဟုတ်တာ ဒါမှမဟုတ် သင် Gold Gymထဲမှာမောင်အိုလံပီယာ တစ်ယောက်နဲ့ ပြိုင်ကစားနေတယ်ဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာတွေးမလား တွေးလိုက်ပါ အဆုံးစွန်ထိ တွေးလိုက်ပါ ဒါပေ့မယ် အတွေးက်ု စိတ်ထည့် ခွန်အားကို အသုံးချ အလေးကို မ တင်လိုက် အချိန်နဲ့ လုံ့လဝီရိယကိုရင်းနှီးလ်ုက်ပါသင်လိုချင်တဲ့ ဘော်ဒီဆိုတာ မဝေးသေချာ တစ်နေ့ဖြစ်လာမှာပါ။စိတ်ဓာတ်ကိုအမြဲတက်ကြွနေအောင်စေ့ဆော်မှုစိတ် ဓာတ်ကို တစ်သမတ်ထဲမွေးပါ။ထိပ်သီးကာယဗလမောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လောက်အချိန်ပေးဆပ် ရတယ်ဆိုတာကို လေ့လာပါ။Rome was not built inadayဆိုတာလေးကို သတိမူပြီး ဖြတ်လမ်းမှ တိုး တက်ချင်တာတွေကို တွေးချင့်စဉ်းစားပါ လေ့လာချိန်ဆပါ ကာယဗလ လေ့ကျင့်မှုမှာ အချိန်များများ အလုပ်များများ စိတ်ဓာတ်စွမ်းအားကောင်းကောင်း ရည်ရွှယ်ချက်မြင့်မြင့်မားမား လိုပါတယ်။
တင်ဆက်သူ။ ။အောင်အောင် ( လှိုင် )
အမြဲတမ်း သွယ်လျစေဖို့ အတွက်အချက်သုံးချက်
Diet Program အမျိုးမျိုး၊ အဆီချနည်း အဖုံဖုံ ဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ချကြရာတွင် အချို့ လည်း အမြဲတမ်း
သွယ်လျ ကျစ်လစ် နေနိုင်စွမ်း ရှိသလို၊ အချို့ ကတော့ မကြာခင် မှာပဲ ကိုယ်အလေးချိန် ပြန်တက်လာတာ ကိုမြင်တွေ့ နေကြရ ပါတယ်။ဘာတွေမှားလို့ ဘာတွေမှန်တယ် ဆိုတာကို ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် နဲ့ ထောက်ပြလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ fitness လေ့ကျင့်ရင်း အဆီချဖို့ ရည်ရွယ်တယ် ဆိုရင်တော့ သင်သိလိုတာ တွေကို စာအုပ် တစ်အုပ်တည်းနဲ့သိအောင် ညွှန်ကြားပေးနိုင်တဲ့ စာအုပ်ကို ကျွန်တော် ရေးပေးထားပါတယ်။အဲဒီ စာအုပ်နာမည်က ***သိပံ္ပနည်းကျ အဆီချနည်းများ***ပါ။ဤလင့်ခ် တွင် http://www.mediafire.com/…/dnfnlxvsxxncsrrscientific+ways+t…
အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီစာအုပ် တစ်အုပ်လုံးကို ဖတ်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ပါက ယေဘူယျ အချက်သုံးချက်ကိုညွှန်ပြ ပေးလိုက်ပါမည်။ လူသာမန်တိုင်း နားလည် သဘော ပေါက်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။
၁-တနေ့ တာ စားသောက်မှု ပုံစံမှန်ပါစေ။ အကျော်ကြားဆုံး အဆိုတခုက Eat breakfast likeaking, lunch likeaprince and dinner asabeggar.but afteraworkout eat like an Emperor. ဆိုတာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ လူအတော်များများ က တနေ့ တာအတွက် အရေး အပါဆုံးဖြစ်တဲ့မနက်စာကို တော့ ဖြစ်သလိုစား၊
နေ့ လည်စာကိုလည်း ကြုံသလိုဝါး၊ ညစာကျမှ အတိုးချပြီး စားပိုးနင့်အောင် တီးမှတော့ ဖက်တီးမဖြစ်လို့ 
ဘာဖြစ်မတုန်းဗျ။မနက်စာ ကိုအာဟာရ ပြည့်ဝအောင် စားကြည့်စမ်းပါ။ သင့်တနေ့ တာ ဘယ်လောက်
အသက်ဝင် အားပါသလဲ ဆိုတာခံစားကြည့်ပါ။ မနက်စာမှာ ပရိုတိန်း စားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ရွှေမြန်မာတွေ ကတော့ ပဲပြုတ်နံပြားလောက်၊ မုန့် ဟင်းခါးလောက်နဲ့ တင်းတိမ်နေ
တတ်ကြပါတယ်။အဲဒီ အကျင့်လေးတွေ ပြင်ဖြစ်အောင် ပြင်လိုက်ပါ။
၂-ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ကိုမကြောက်ကြပါနဲ့ ။ဒါပေမဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် အမျိုးအစား ရွေးချယ်မှုတော့ မှန်ပါစေ။
အဆီချချင်လို့ ကယ်လိုရီ လျော့စားတဲ့ မိတ်ဆွေ အချို့ နေ့ လည်စာကို ကွတ်ကီးနဲ့ ကော်ဖီအေးတဲ့ ဗျာ။
ဘယ်လိုလုပ် အဆီကျမတုန်း၊ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ရွေးချယ်မှု မှားတာကိုး။အာဟာရ လည်း ဇီးရိုးပါ။အိုဗျာ
မိုင်းနပ်စ် လို့ တောင်ဆိုချင် ပါသေးတယ်။ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ခြင်းက သင့်ကိုယ်တွင်းမှ
GABA and Serotonin တွေ အထွက်မှန်စေပြီး နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ်။နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်ခြင်း
က သင့်ကို သွယ်လျ လှပစေနိုင်တာ သင်သိပါသလား။
၃-ညစာ စားချိန်နှင့် ပါတ်သက်ပြီး ၀ါဒီမများပါနဲ့ ။လူအတော် များများက ကိုယ်အလေးချိန် ကျချင်ယင် ညနေ
ခြောက်နာရီ ကျော်ရင် ဘာမှ မစားပါနဲ့ ဆိုတဲ့ ပုံပြင်ကို အဟုတ်မှတ်နေ ကြတယ်။ဒါလည်းမှားတဲ့ အယူအဆပါ။
ဒါဟာ ၂၁-ရာစုပါ။စောစောစား စောစောအိပ်ရအောင် အညာ life style မဟုတ်ပါဘူး။ ယနေ့ ခေတ် လူ
အတော်များများဟာ ညဆယ်နာရီမှ ဆယ့်နှနာရီလောက် အတွင်းသာ အိပ်စက်ကြပါတယ်။ ဒါဆို ညနေ
ခြောက်နာရီ ကျော်ကတည်းက အစာပိတ်ထားရ ရင်ဘယ်လောက် ပင်ပန်းမလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ နောက်တချက် က အပင်ပန်းခံသလောက် အကျိုးထူးနိုင်ပါသလား ဆိုတာပါပဲ။ Dr.Mark Houston ဆိုတဲ့ 
သုတေသီ ပညာရှင်က ညမအိပ်မှီ နှစ်နာရီလောက်သာ ခြားပြီး အစားပိတ်ရင် လုံလောက်ပါတယ်တဲ့ ။
သုတေသန အချက်အလက် တွေနဲ့ တင်ပြခဲ့တာပါ။ အဲလိုလုပ်ခြင်းဟာ လည်း တစ်ပါတ်ကို သုံးရက်လောက်
လုပ်ရင် လုံလောက်ပါတယ်တဲ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ မိတ်ဆွေတို့ ကို အထူးဂရု ပြုစေလိုတာက ညစာစားရာတွင်
အသားဓါတ်၊ တဖြည်းဖြည်ချင်း ကြေညက် စေသော ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် နှင့် အမျှင်များသည့် အရွက်များကို
မဖြစ်မနေ စားပေးသင့်သည် ဆိုတာပါပဲ။ကိုယ်အလေးချိန် ချလိုသူများ အထူးဂရု ပြုရမည့် အချက်များမှာ-
ဘီယာ၊ညအိပ်ရေး ပျက်ခြင်း၊ အချိုရည်များ ၊ကိတ်၊ ကွတ်ကီးများ နှင့်ဆီကြော်မုန့်များပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခြေခံ အချက်လေးတွေကို ဂျင်မ်ကစားသူရော မကစားသူတွေပါ လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
Gymကစားသူအများစုဧ။်ရင်ဖွင့်သံကိုအများဆုံး ကြားနေရသည်မှာတိုးတက်မှုနှောင့်နှေးနေသည် ဆိုသည့်အသံပင်ဖြစ်သည်။Gymကစားခြင်းကို အချိန်တန်Gymသွားပြီးအလေးမကစားနေရုံနှင့်ပြီးပြည့်စုံမည်ထင်ရင်တော့သင့်အထင်မြင်တွေကိုပြောင်းလဲ
လိုက်ပါ။အများစုလက်ခံနား လည်ထားသည့်အတိုင်း အာဟာရ အနားယူမှု နည်းစနစ်မှန်ကန်မှု လေ့ကျင့်ရက်မှန်ကန်မှု နှင့် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုဆိုသည့်နောက်ကွယ်တွင် မေ့နေသည်အရာတစ်ခုတော့ရှိနေသည်။အဘယ်အရာနည်း..
.ပရိုဂရမ်ပေါင်း လေ့ကျင့်ရက်သတ်မတ်မှုပေါင်း မည်မျှပင်ဖြစ်စေ မိမိ လေ့ကျင့်နေသည့် ပရိုဂရမ်တွင် ပါဝင်သော လေ့ ကျင့်ခန်းများသည် Compound movements isolation movements စသည်တို့ကို ခွဲခြားလေ့ကျင့်ရန်နိုင်ရန်သိထားသင့်သည်။ပေါ့ဆစွာ ခြင်း၏ရလဒ်သည်နှောင့်နေးနေမည်သာဖြစ်သည်။
ဥပမာအနေနှင့်ဆိုကြပါစို့လက်မောင်းးကစားသည့်နေ့တွင် မိမိကြိုက်သလိုစိတ်ထင်ရာလက်မောင်းလေ့ကျင့်ခန်းများကစား ပြီးမှ နောက်ကျောပြင်ကြွက်သားကြီးကစားမည် ဆိုလျင်တော့သင့်လေ့ကျင့်မှုသည်အလွဲကြီးလွဲနေပြီဖြစ်သည်။minor muscles များဖြစ်သည့် လက်မောင်းရှေ့ နောက် တို့သည်Major muscles်ကြွက်သားကြီးများလေ့ကျင့်ရာ compound exercisesများတွင် မပါမဖြစ်ပါဝင်နေသည်။ထိုကဲ့သို့သောအချက်တစ်ချို့ကို မသိပဲ လက်မောင်းလေ့ကျင့်ခန်းများကို စိတ်ဆန္ဒ ပြင်းထန်စွာဦးစွာလေ့ကျင်ခင်းသည်လုံးဝအမှားပင်။မှားမှန်းမသိမှားတတ်သောအချက်များကို
လေ့လာထားရန်မှာမိမိ၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။ isolation များကို ဦးစားပေးလေ့ကျင့်လွန်းလျင်လည်းCompound လေ့ကျင့်ခန်းများတွင်အလေးများ များဖြင့်လေ့ကျင့်သောအခါသေပြီဆရာပင်ဖြစ်သည်။ဆိုကြပါစို့..ရင်အုပ်တွန်းလေ့ကျင့်ခန်း၂မျိုး ဖြစ်သည့် ဘားရှည်ရင်အုပ်တွန်းနှင့်Dumbell. ဖလိုင်း တွင် compound exercise ဖြစ်သည့် ဘားရှည်ရင်အုပ်တွန်းကိုအရင်ကစားသင့်သည်။(ခြွင်းချက်အနေနှင့်
Pre-Exhaustion ကြွက်သားကြိုတင်ပင်ပန်းစေသည့်ကစားနည်းမှာတော့ Dumbell ဖလိုင်းဖြင့်အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ကြသည်)ထိုကဲ့သို့ပင် barbell press နှင့် machine press ယှဉ်လာလျင်လည်း barbell press ကို အရင်ဆုံးစာရင်းမှလက်မလွတ်သင့်ပေ ။machine exercise နှင့် Free_weight exercise တွင် machine exercise သည် compound ဖြစ်နေလျင်machine exercise ကိုသာဦးစားပေးပါ။ထပ်မံ၍ Barbell နှင့် Dumbell Exercise များတွင် barbell incline press နှင့် Dumbell flat bench press တွင် သင့်အနေနှင့် ကြွက်သားများ အားမကုန်ခင် အလေးများများနိုင်သည့် barbell incline press barbell exercise များသညကိုဦးစားပေးသင့်သည်။ဆိုလိုသည်မှာ် barbell လေ့ကျင့်ခန်းများသည် Dumbell exerciseများထက် အလေးများများကစားနိုင် သည့်အတွက်ကြီးထွားမှုအတွက်လေ့ကျင့်နေသည့်ကာလတွင် မဖြစ်မနေဦးစားပေးသင့် သည် ။ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်ကို သဘောပေါ်က်မည်ဟုထင်ပါသည် compound exercise များကိုသာဦးစားပေးလေ့ကျင့်ခိုင်းနေ၍isolation များကိုအကျိုးမရှိဟုမထင်ပါနှင့်။သင်၏လေ့ကျင့်မှုပရိုဂရမ်တွင် compound -is၂မျိုးစလုံးမဖြစ်မနေပါဝင်သင့်သည်။isolationအလော တကြီးလေ့ကျင့်ပြီးမှအခြေခံcompound. exercise များတွင် လုံလောက်သည့် ညှစ်အား နှင့်အလေးဝန်မသုံးနိုင်ခြင်းများကိုတွေ့မြင် နေရခြင်း minor muscles ကိုအရင်ကစါးပြီးမှ majior muscle လေ့ကျင့်သည့်အတွက် မသိမသာမှားနေသောအမှားများကိုအပြုသဘောရေးသားပေး ခြင်းသာဖြစ်သည်။လွတ်လပ်စွာအမြင်ကွဲ
ပဲနို့ နှင့် fitness
Soy milk -ပဲနို့ ၊ နာမည်ကျော် သလောက် ကမ္ဘာ အ၀ှမ်းမှ fitness trainer များ အကြား အငြင်း အပွားရဆုံး
သော အာဟာရ ဖြစ်သည်။အချို့ နည်းပြများ ကပုံမှန် သောက်သင့်သည် ဟုပြောသလို အချို့ ပညာရှင် များက
လည်း လုံးဝ တားမြစ်သော အာဟာရ အကြောင်းကို အနည်းငယ် ဆွေးနွေးကြည့် ကြပါစို့ ။
အစကတော့ ကိုယ်နှင့် မဆိုင်သည့် အတွက် မပြောဘဲ နေမည်ဟု ကြံရွယ်ထား သော်လည်း ကျွန်တော့် အိမ်သူ
သက်ထား ကိုယ်တိုင်က ရင်သွေးငယ် များအတွက် ယိုးဒယားမိတ် ပဲနို့ အကပ်လိုက် ရေခဲသေတ္တာ ထဲဝယ်ထည့် လာသည့် အချိန်၊ protein supplement များဝယ်ယူ သောက်သုံးရန် အခက်အခဲ ဖြစ်နေသည့် ညီငယ် ကစားသမား လေးများက လည်းမေးသည်နှင့် တိုက်ဆိုင်လာ ၍ ကျွန်တော့် အမြင်လေးကို တင်ပြပေး လိုက်ပါသည်။
-ပဲနို့ တွင် ပါဝင်သော Phytic Acid သည် ကွန်ပေါင်း တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး မှီဝဲထားသော အာဟာရ များကို လျော့ပါးစေကာ၊ သတ္တုဓါတ်များ စုပ်ယူမှုကို လည်းအကြီးအကျယ် ဖရိုဖရဲ ဖြစ်စေသည့် အတွက် အစာချေစနစ် အားနည်းသော သူများအတွက် မည်သို့ သော သက်ရောက်မှု ရှိမည်ကို ခန့် မှန်းကြည့်ပါ။
-ပဲနို့ တွင် Oxalic Acid သည် စားသုံးထားသော ကိုယ်တွင်းမှ ကယ်လ်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ် နှင့် သံဓါတ်များ ၏စုပ်ယူမှုကို လျော့ကျ ယိုယွင်းစေနိုင်ပါသည်။
-ဈေးကွက်တွင် ရောင်းချနေသော ပဲနို့ အများစုသည် အချဉ်ဖောက် ထားကြသလို ဓါတု ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်
နေသည် မှာ ၉၉% အသေအချာ ပင်ဖြစ်၏။
-ပဲနို့ တွင် ပါဝင်သော Phyto-estrogen ကြောင့် ကျားဟိုမုန်း လျော့နည်းခြင်း၊ လင်စိတ်နည်းပါးသွားခြင်း
နို့ များစူလာခြင်း စသည့် ဆိုကျိုးများ ကိုမလွဲမသွေ ကြုံရပါမည်။
-ပဲနို့ တွင် ပါဝင်သော goitrogenic က သိုင်းရွိုက် ၏လုပ်ဆောင်မှုကို အနှောက်အယှက် ပြုသည့်အတွက် အိုင်အိုဒင်း စုပ်ယူမှု ယုတ်လျော့ကာ တဖြည်းဖြည်း (ကိုယ်အလေးချိန်) အဆီတက်လာ စေမည်ဖြစ်သည်။
-ပဲနို့ တွင် ချေဖျက်ရန် ခက်ခဲသော ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် တမျိုးဖြစ်သည့်oligo-saccharides များစွာ ပါဝင်သည့်
အတွက် ရင်ပြည့်ခြင်း လေပွခြင်း စသည်တို့ ကို လည်းခံစားရမည် ဖြစ်သည်။
-ပဲနို့ ဗူး များကို စီမံ ထုတ်ပိုးရာတွင် မဂ္ဂနီစီယမ် များလွန်းသော စည်၊ဗူး၊များ တွင် ထည့်ထားသော ကြောင့်
ထိုမဂနီစီယမ် များက ပဲနို့ ထဲ ပျော်ဝင်ပြီး၊ အားလုံးသိသည့် အတိုင်းပင် မဂ္ဂနီစီယမ်ဓါတ် များလွန်းပါက
အာရုံစူးစိုက် နိုင်စွမ်း လျော့ကျလာ မည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် နို့ ဆိုလျင် နို့ အုံမှ ထွက်သော နို့ (တိရိစ္ဆာန် မှထွက်သော)နို့ သာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်ကို
အထက်ပါ တင်ပြချက်များသည် သုတေသန များသာဖြစ်ပြီး၊ ကိုယ်တွေ့ အတွေ့ အကြုံများကို အနည်း
-ပဲနို့ သောက်လွန်းသော အမျိုးသားများသည် ကိုယ်အလေးချိန်(အဆီ)တက်လာလေ့ရှိသည်။
-သို့ သော် ကြွက်သား တည်ဆောက်မှု နှုန်းလျော့ကျ သွားသည်။
-အဆိုးဆုံးက အဆီချ လိုသူများ ပဲနို့ သောက်နေ ကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေး ဟူသော စကားလေး
ကိုလက်ကိုင်ပြုကာ ပဲနို့ သောက်လိုက်၊ ပေါင်မုန့် စားလိုက် လုပ်နေသော သူများစွာကို မြင်တွေ့ နေရ ပါသည်
ထိုသူများ တနေ့ တခြား ကိုယ်အလေးချိန် တိုးတိုးလာ သလို ထိုအမျိုးသား များ၏ နို့ အုံများလည်း စူစူကာ
-ခနာကိုယ် ကြီးထွားချင်သူ များအနေနှင့်လည်း ပဲနို့ အစား နွားနို့ ပြောင်းသောက်ပါဟု အကြံပေးတင်ပြ
ကျွန်တော် သိပါသည် ပဲနို့ မကောင်းကြောင်း သုတေသန တစ်ရာရှိလျှင် ပဲနို့ ကောင်းကြောင်း သုတေသန
တစ်ရာရှိ မည်မှာ အသေအချာ ပင်ဖြစ်သည်။ကျွန်တော် တင်ပြသမျှသည် ကျွန်တော် ယုံကြည် လေ့လာ မိသမျှကို မျှဝေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက် က ပဲနို့ ၏ ကောင်းကျိုးများကို အထောက်အထားနှင့်တင်ပြလာပါကလည်း အငြင်းအခုံ ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။မည်သူမဆို မိမိ ခန္ဓာကိုယ်
မိမိ life style စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ထို့ ကြောင့် ကျွန်တော်သည် ပဲနို့ နှင့်ပါတ်သက်သည့် ခံယူချက် ကို ပြောင်းလဲမည် မဟုတ်ပါ။
Because I hate that feminizing agent which can disturb my body's testosterone production!
Sexy Six Pack အတွက် ဒီခြောက်ချက်
အရှိန်အဟုန် အပြည့်နဲ့ ပြောင်းလဲနေတဲ့fitness ရေစီးကြောင်း အရ ယနေ့ ခေတ် လူငယ်အတော် များများ
ဟာ ခနာကိုယ် အကြီးစားကြီး တွေထက် ကျစ်လှစ် စမတ်ကျ လှပတဲ့ဘော်ဒီမျိုးကို ပိုမိုလိုလား နှစ်သက်
တောင့်တ လာကြပါပြီ။တောင့်တင်း သန်မာတဲ့ခနာကိုယ် တခုရဲ့ ပြယုဂ်က ထင်ရှား ပေါ်လွင်နေတဲ့ ဝမ်းဗိုက်
ဗယ်လီ ကြွက်သား တွေ ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပိုမို ထူးခြားလာတာက တော့ အမျိုးသား လူငယ်တွေသာမက အမျိုး
သမီးငယ် တွေကပါ six packs အတွက် ဘယ်လို လေ့ကျင့်ရမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေး တွေမေးလာကြ ကုန်ပါပြီ။ ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ six packs နှစ်သက်တဲ့ ညီငယ်တွေ အနေနဲ့ လည်း
ကာယဗလ ပြိုင်ပွဲ ၀င်လို၍ ပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိခနာကိုယ် ကိုပိုမို ထွားကျိုင်း လို၍ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခနာကိုယ်ကို ထုထပ်
တင်နေ သော ညီငယ် ကစားသမားများကို မဝေဖန်သင့် ကြောင်းတေ့ာ အကြံပေးပါရစေ။ တကယ်တေ့ာ
ဖစ်တနက်စ် လေ့ကျင့်သူတိုင်း ကတော့ ၀မ်းဗိုက်ကြွက်သား တွေကို လေ့ကျင့်ကြတာ ချည်းပါပဲ။ အဲဒီတော့
၀ါဒီပွား စရာမလို တော့ပါ။လိုရင်း ပြန်ဆက် ရလျင် ဗယ်လီ ကြွက်သား အတွက် အရေးပါသော အချက်
ခြောက်ချက် ကိုမျှဝေ လိုက်ပါတယ်။
၁-၀မ်းဗိုက် အဆီချဖို့ အတွက် ဗယ်လီ တမျိုးတည်းကို သာ မကစားပါနှင့်။
ခနာကိုယ်က အဆီချချင်ယင် တကိုယ်လုံးက အဆီပမာဏ ကိုလျော့ချ နိုင်ဖို့ ကြိုးစား ရပါမယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ငါး
ဆယ်လောက်က တော့ ၀မ်းဗိုက်က အဆီချ ချင်ယင် ဗယ်လီများများ ရိုက်အယူ အဆဆိုးကြီး တွင်ကျယ်ခဲ့ပါ
တယ်။အခုတော့ သိပံပညာ ကအဲဒီ အယူအဆ အသုံးမ၀င် ပုံကို အခုလို ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဗာဂျီးနီးယား
တက္ကသိုလ်မှ သိပံပညာရှင် သုတေသီများက ***၀မ်းဗိုက် အဆီတစ်ပေါင်ကျ ချင်ရင် ဗယ်လီ အကြိမ်
နှစ်သိန်းခွဲ ရိုက်မှရမယ် *** ဆိုတာကို အထောက်အထားပြ တင်ပြခဲ့ပါသည်။
၂-ကြွက်သား အုပ်စု တိုင်းကို လေ့ကျင့်ပါ။
သင့်ကိုယ်တွင်း မှာ ကြွက်သား ပမာဏများများ ရှိလာလေလေ သင့်ခနာကိုယ်က ကယ်လိုရီကို လောင်ကျွမ်း
အသုံးပြုမှု များလာလေလေ ပါပဲ။ အလေးများနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ် ကစားချိန် တစ်ချိန်ဟာ သင့်ကိုယ်တွင်း
ဇီဝဖြစ်စဉ် ကိုနှစ်ရက်အထိ ပိုမိုတိုးတက် မြန်ဆန်စေနိုင် ပါတယ်။ Syracuse University မှ သုတေသီများက
ခနာကိုယ် အောက်ပိုင်း လေ့ကျင့်ခန်း များက အပေါ်ပိုင်းလေ့ ကျင့်ခန်းများထက် အဆီကို ပိုမိုလောင်ကျွမ်း
စေနိုင်ကြောင်း ကိုသုတေသန ပြုတင်ပြ ထားသည့်အတွက် ဗယ်လီ ပေါ်လိုသော ကစားသမားများ အနေနှင့်
ခနာကိုယ် အောက်ပိုင်းကို မဖြစ်မနေ လေ့ကျင့်သင့်ပါသည်။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ရန်
အချိန်အတော်ကြာ ပျက်ကွက်နေသူ ဆိုပါကလည်း မဖြစ်မနေ ပြန်လည် လေ့ကျင့်ပါ။ ကြွက်သားတွေမှာ
Muscle memory ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မကြာခင် အချိန်တိုအတွင်းမှာ ရလာဒ်ကောင်း တွေပြန်လည် ပိုင်ဆိုင်
၃-Gym ကစားချိန် တွေကို ဘယ်တော့မှ ၀မ်းဗိုက် လေ့ကျင့်ခန်း တွေနဲ့ မစတင် ပါနဲ့ ။
သင်အားပြည့် နေချိန်မှာ ကြွက်သား တည်ဆောက်ဖို့ အတွက် အရေးပါတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း တွေကို ဦးစားပေး ကစားပါ။ ၀မ်းဗိုက် လေ့ကျင့်ခန်း တွေကိုတော့ နောက်ဆုံးမှ ကစားစေချင် ပါတယ်။အဓိကနဲ့ သာမည ကွဲပြား
၄-Plank exercise ကို လေ့ကျင့်ရာမှာ master ဖြစ်နေပါစေ။
၀မ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေ စူထွက်မလာအောင် တားဆီးပေးနိုင် သလို ၀မ်းဗိုက်ကြွက်သား တွေအပြင် ခနာကိုယ်
ရဲ့Core Strength အတွက် အရေးပါတဲ့plank လေ့ကျင့်ခန်းကို youtube, daily motion စတဲ့ ဗီဒီယိုဆိုဒ်
တွေမှာ Plank variations လို့ ရိုက်ပြီး ရှာပါ။ plank လေ့ကျင့်နည်း အမျိုးမျိုးကို တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။abs
Exercises တွေလည်း ရှိပါတယ်။ လေ့လာ လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။သမားရိုးကျ ဗယ်လီ လေ့ကျင့်ခန်း တွေကို ခဏ ခေါက်ထားလိုက်ပါ။
၅-သင့် ဂျင်မ် က ပြေးစက်တွေကို တခြားသူတွေ အတွက် ပေးထား လိုက်ပါ။
သင်ဗယ်လီ ပေါ်ချင်ရင် အလေးတွေနဲ့ မိမိနိုင် သလောက် ပြင်းထန်စွာ လေ့ကျင့်ဖို့ ကျွန်တော် အကြံပြုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအယူ အဆရဲ့ အားသာချက်ကို သုတေသီတွေက ***အလေးနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ကျော့ ညှစ်ကစားခြင်းက ပြေးစက်ပေါ်မှာ ခြောက်မိနစ်လောက် ပြေးတဲ့ ပမာဏနဲ့ တူညီတဲ့ ကယ်လိုရီ တွေကို လောင်
ကျွမ်းစေ နိုင်တယ်*** လို့ တင်ပြ ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဆို သင့်ကစားချိန် တစ်ချိန်မှာ အလေးနဲ့ ကစားတဲ့ အကျော့
တွေပေါင်းလိုက်လို့ပျမ်းမျှ ဆယ်ခြောက်ကျော့ လောက် ရှိတယ်ဆို ကစားချိန် တစ်ချိန်မှာ သင်လောင်ကျွမ်း လိုက်တဲ့ ကယ်လိုရီ ပမာဏဟာ ပြေးစက်ပေါ်မှာ တစ်နာရီခွဲ ပြေးသလောက်ကို ထိရောက်မှု ရှိတာ သင်သိ
လောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ် အားသာချက် တစ်ချက်က အလေးနှင့်ကစားခြင်းက ကြွက်သားတွေ တည်ဆောက် ပေးနိုင်ခြင်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့ သင်နိုင်သလောက် ပြင်းထန်စွာ လေ့ကျင့်ဖို့ တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် သင့်ဂျင်မ် ကပြေးစက်တွေပေါ်မှာ သိပ်ကစား ချင်နေသူ တွေကို ဦးစားပေး လိုက်ပါ လို့ အကြံပြုချင် ပါတယ်။
၆-အာဟာရ ကိုရွေးချယ် စားသောက်ပါ။
ယခုတင်ပြသည့် နောက်ဆုံးအချက်က အရေးအပါဆုံးပါ။ ဗယ်လီကြွက်သား တွေလှပစွာ ပေါ်ထွက်လာဖို့ က
ပြင်းထန်စွာ ကစားရုံသက်သက် နဲ့ တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သင်ဟာ မှန်ကန်တဲ့ အာဟာရ ကို စနစ်တကျ ရွေးချယ် စားသောက် တတ်ဖို့ လည်း လိုပါတယ်။အဲဒီလို လေ့ကျင့်ခန်း နဲ့ အာဟာရ ဟာသင့် life style ဖြစ်လာ
ပြီဆို မှတ်လိုက်ပါ။Sexy six packs ဟာ သင့်ဆီကို တနေ့ တလံ ဘယ်ရွေ့ မလဲ ဆိုသည့် စကားအတိုင်း
ဆိုက်ဆိုက် မြိုက်မြိုက် ရောက်လာပါ လိမ့်မည်။Myanmar Fitness လောကရဲ့ သမိုင်းသစ် ရေးဖို့ ကြိုးစား
နေတဲ့ Muscle Professor ရဲ့ Fan ဖြစ်နေခြင်းက သင့်ကို Blue Collar အဆင့်လောက် ရှိသူတွေရဲ့ 
အာဘော် တွေထက် အလှမ်းဝေး လွန်းတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေစေတာ ယုံပါလို့ ပြောရင်း-
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသန်းပေါင်းများစွာ တွင်အသံ၊ရုပ်ဆင်း အင်္ဂါတစ်ဦးနှင့် တဦးကွဲပြားသလိုပင်
မွေးကတည်းက ပင်အမျိုးသားတိုင်း၏ လိင်အင်္ဂါမှာ လည်းတစ်ဦးနှင့်တဦးမတူညီကြပေ။ကာမသျှတ္တရ
ပညာရှင်များက အမျိုးသားများ၏ ခနာကိုယ် ထွားကျိုင်းမှုသည် အသက်သုံးဆယ် အရွယ်တွင်ရပ်တံ့
သွားသော်လည်း လိင်အင်္ဂါမှာမူ အိုမင်းသွားသည် အထိကြီးထွားနိုင်စွမ်း ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြ၏။
သိပံပညာရှင်များကလည်း ဤအချက် ကိုလက်ခံ၏။ဥပမာ-အသက်ကြီးသော အမျိုးသား တစ်ယောက်၏
လိင်တံသည် ဆယ်ကျော်သက် အမျိုးသားများ လိင်တံထက်ပိုမို ကြီးထွားနေလေ့ ရှိသည်မှာ သဘာဝဖြစ်
သည်။သို့ သော် မာတောင် ထောင်မတ် နိုင်စွမ်း တော့ခြားနားသွားလေ သည်။အသက်အရွယ် အိုမင်းသော်
လည်း ဒေါင်ဒေါင်မြည်နိုင်စွမ်း ရှိနေသေးသည့် နည်းလမ်းများကို အလျဉ်းသင့်သလို တင်ပြပေးသွားပါမည်။
***လိင်တံအလွယ်တကူ ကြီးထွားစေ နိုင်သည့်နည်းလမ်း တခုမှာ ဆီးသွားပြီးတိုင်း ရေဆေးပါ။ထိုသို့ ရေ
ဆေးနေစဉ် လိင်တံ အရင်းမှနေ၍ အဖျားပိုင်းအထိ ဆီးစက်များ ကျန်မနေစေရန် ငါးကြိမ်လောက် တွန်း ပို့ 
လွှတ်(ဂွင်းတိုက်သည့် ပုံစံ)သည့်အနေအထား ပြုလုပ်ရန် ပင်ဖြစ်သည်။***
အလွန်လွယ်ကူ သလောက်အကျိုးများသည့် နည်းစနစ်ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်ကြည့်ပါက သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အခုတင်ပြမည့် ဆောင်းပါးသည် လိင်အင်္ဂါ အရွယ်အစား၏ အရေးပါပုံထက် အမျိုးသမီးများ၏ စိတ်ကျေနပ်
မှုကို အပြည့်အ၀ ပေးနိုင်မည့် လိင်တံအနေအထား ရအောင် မည်သို့ ပြုလုပ်ရမည်ကို တင်ပြထားခြင်း
လူအမျိုးမျိုး လိင်တံအနေအထား မတူကွဲပြားပေမဲ့ ယေဘူယျ လိင်တံအမျိုးမျိုး ကိုအနှစ်ချုပ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ကြည့်ပါက နှစ်မျိုးသာ ရှိလေသည်။လိင်တံထိပ်ဖျား ကြီးမားသည့် မှိုပွင့် ပုံစံ နှင့် လုံးပါတ်ကြီးပြီး ထိပ်ဖျား
သေးသည့် ပုံစံဖြစ်သည်။သို့ သော် ထိပ်ဖျား မှိုပွင့် ပုံစံ လိင်တံကသာလျင် အမျိုးသမီးကို ပြီးမြောက်နိုင်ရန်
အလွယ်တကူ စွမ်းဆောင် ပေးနိုင်သည့်အပြင် အမျိုးသမီး အင်္ဂါ၏ အတွင်းပိုင်း အနှံ့ နှင့် G-spot ကိုပါ
လှုံ့ ဆော်နိုင်သည့် အတွက် ထိုပုံစံလိင်တံ ပိုင်ရှင်အမျိုးသားများသည် အထူးကံကောင်းကြလေသည်။
ကျန်အရင်းတုတ် အဖျားရှုး အမျိုးသားများကား ၀မ်းနည်းစရာပင်။သို့ သေ်ာ ထိုကဲ့သို့ သော ခဲတံပုံစံ
အရင်းတုတ် အဖျားရှုးသူများသည် လည်း လေ့ကျင့်လျင် မှိုပွင့်ပုံစံ လိင်တံ ရနိုင်ပါသည်။ထိုသို့ လိင်တံ
ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းများကို လိုတိုရှင်း ဖော်ပြပါမည်။
၁-Milking ခေါ် နို့ ညှစ်သည့် ပုံစံ လေ့ကျင့်ခန်း
နွားနို့ ညှစ်သည့် ပုံကို မျက်စိထဲ မြင်ကြည့်ပါ။ ထိုကဲ့သို့ ပင် လက်ညှိုးနှင့် လက်မကို အိုကေဟု လုပ်ပြသည့်ပုံစံ ကွင်းပြီး လိင်တံကို အရင်းမှ အဖျားအထိ တွန်းညှစ်သွားပါ။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် လိင်တံအတွင်းသို့ သွေးပိုမို
ရောက်စေသည့် အတွက် လိင်တံထိပ်ဖျား ရောလုံးပါတ် ကိုပါထွားကျိုင်းစေပြီး လိင်တံတစ်သျှူးများကို ဆန့် ထုတ် ပေးသည့်အတွက် လိင်တံကို လည်းရှည်လာစေပါသည်။
လိင်တံကို အရင်းနားမှ ခွာ၍ ညှစ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။လိင်တံကို ခံနိုင်သလောက် အထိတင်းညှစ်ထားပြီး
တဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်လည် ဖြေလျော့ ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ထိုလေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်မှီ လိင်တံ အနည်းငယ် နိုးကြားမှု ရှိနေစေရမည် ဖြစ်သည်။ penis pump ပစ္စည်းသည် ဤနည်းစနစ်ကို အခြေခံထားခြင်း ဖြစ်သည်။ လိင်တံ၏ လုံးပါတ်နှင့် တောင့်တင်း သန်မာမှုကို အထူးအားဖြည့်ပေး၏။
၃-အထက်ပါ လေ့ကျင့်ခန်း နှစ်ခုလုံးကို လေ့ကျင့်ပြီးနောက် ကုလားထိုင် တစ်ခု၏ အစွန်းတွင် ထိုင်ပါ။ ပေါင်တံ နှစ်ခုကို အနည်းငယ် ချဲထားပါ။ လိင်တံကို အရင်းမှ ကိုင်၍ လိင်တံထိပ်ဖျားကို ပေါင်နှစ်ဖက် စီသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း တစ်ချက်စီ မှန်မှန်လေး ရိုက်ခတ်ပေးပါ။အရှိန်ပြင်းရန် မလိုပါ။စည်းချက်ကျ ရန်သာ လိုပါသည်။ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းက အာရုံခံစားမှု ပြင်းထန်သော လိင်တံထိပ်ဖျား၏ ခံနိုင်ရည်ကို မြင့်မားစေပြီး
သုတ်ထိန်းအားကောင်းလာ မည့်အပြင် လိင်တံ ထိပ်ဖျား၏ သန်မာမှုကိုအားပေး သည့်လေ့ကျင့်ခန်း ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အထက်ပါ သင်ခန်းစာ လေ့ကျင့်ခန်းများသည် နှစ်ပေါင်းလေးငါးထောင် သက်တမ်းရှိ တရုတ်တို့ ၏ တာအိုဝါဒ
အယူအဆနှင့် အိန္ဒိယတို့ ၏ ကာမသျှတ္တရ လိင်မှုဒသနများမှ ကောက်နှုတ်တင်ပြ ထားသည့် ပရော်ဖက်ဆာ
ဒေါက်တာစတီဗင် တီချမ်း၏ Tao of sexology မှ ထုတ်နှုတ်တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။အထက်ပါနည်းများ
သည် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အသုံးပြုပြီး အကျိုးပြုသော နည်းစနစ်များဖြစ်သည့် အတွက် ညီအကိုများကို မျှဝေ
ခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားတိုင်း သန်စွမ်းနိုင်ကြပါစေ။
Gym ကစားတော့မယ် ဆိုရင်
အမေးများလာ တဲ့မေးခွန်းလေး တစ်ခုပါ။Gym စကစားတေ့ာ မယ်ဆိုရင် ဘာတွေ လိုအပ်လဲ၊ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် တွေကို သိချင်သူတွေ များလာတဲ့ အတွက် tips အချို့ ကိုမျှဝေ လိုက်ပါတယ်။
၁-ယေဘူယျ လူအတော် များများဂျင်မ် ကစားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက် က ခနာကိုယ် ကြီးထွားလို ၍ပဲဖြစ်ဖြစ်
အဆီကျ လှပလို၍ ပဲဖြစ်ဖြစ် ကစားတတ်ကြ ပါတယ်။ပုံမှန် ကစားနေ သူတွေက တော့ ကိုယ်အလေး ချိန်ချ
ချင်ရင် ကြွက်သား ထုထည် တင်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ခနာကိုယ် ကြီးထွားလို သူတွေ အနေနဲ့ လည်း
ဆက်တိုက် ကိုယ်အလေးချိန် တက်ဖို့ မလွယ်ကူ လှပါဘူး။ဒါပေမဲ့ သင်ဟာ ဂျုင်မ် စကစား တော့မယ့်လူဆိုရင်
တော့ မင်္ဂလာပါ သင်ဟာ ခနာကိုယ် ထဲကကြွက်သား တွေထွက်လာ အောင်လုပ်နေစဉ် မှာလည်း ကိုယ်တွင်း
က မလိုအပ်တဲ့ အဆီပိုတွေကို လျော့ချနိုင်ပါ သေးတယ်။ဒါက လူသစ်တွေ နဲ့အချိန်အတော်ကြာ လေ့ကျင့်ခန်း
လုပ်ရန် ပျက်ကွက် နေတဲ့ ပြန်လေ့ကျင့်တော့ မဲ့ လူတွေ ရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပါ။
Gym ကစားတော့ မယ်ဆိုရင်-
၁-မိမိနှင့်အနီးဆုံး နေရာရှိ ဂျင်မ် တစ်ခုခုကို ရှာပါ။
၂-နည်းပြ ဆရာကောင်း ရှာပါ။
၃-တစ်ပါတ် လျင် သုံးရက်မှ လေးရက်သာ ကစားပါ။
၄-ကစားချိန် တစ်ချိန် လျင် အများဆုံး တစ်နာရီ မှ တစ်နာရီ ဆယ့်ငါး မိနစ်သာ ဖြစ်ပါစေ။
ထို့ ထက် ကစားချိန် နည်းပါက ပိုကောင်း၏။
၅-ခနာဗေဒ ကို လိုသလောက် သိပါစေ။ဒါမှ မိမိကို လေ့ကျင့်ခိုင်းတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ ဟာအကျိုး ရှိမရှိ
၆-အလေး၊ ဘာဘယ် ၊ဒမ်ဘယ်၊ ကေဘယ်နှင့် ဘော်ဒီဝိတ် လေ့ကျင့်ခန်း တွေ မျှတပါစေ။
၇-ဖစ်တနက်စ် လောကမှာ ထာဝရ အမှန်တရား ရယ်လို့ မရှိပါဘူး။လူတစ်ယောက် အတွက် အကျိုးပြုနိုင်မဲ့ 
စနစ်က နောက်ကစား သမားတစ်ယောက် အတွက် အကျိုးပြုချင်မှ ပြုတာပါ။ ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တာကို ရှာဖွေ
တတ်ပါစေ။ ပရိုဂရမ် တစ်ခုက ကိုယ့် အတွက် အကျိုးမပြုဘူး မထူးခြားဘူးလို့ ခံယူမိရင် အပြောင်းအလဲ
ပြုလုပ်ဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့ ။
၈-နည်းပြ များနှင့် တွေ့ ရာတွင် Why -ဘာကြောင့် ဆိုသည့် မေးခွန်းကို အမြဲတမ်း သုံးတတ်ပါစေ။
နည်းပြကို စောဒက တတ်စော်ကားသည့် အနေအထားဖြင့် မဟုတ်ဘဲ မိမိ အကျိုးအတွက် သိမ်မွေ့ စွာ
၉-လေ့ကျင့်ခန်း များကို စနစ်တကျ လေ့ကျင့်တတ်ပါစေ။ လေ့ကျင့်ရမည့် ပုံစံအမှန်ကို မသိပါက၊
နည်းပြ အကူအညီကို ယူပါ။ထိုသို့ လည်း အဆင်မပြေ ပါက You tube တွင် လေ့ကျင့်ခန်း သရုပ်ဖော်
ဗွီဒီယို များကို ရှာဖွေ ဒေါင်းလုပ်ယူပါ။
၁၀-အကြောလျော့ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ရမည့် စနစ်များကို လေ့လာပါ။ကာဒီရို လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖြစ်အောင်
လုပ်ပါ။ နည်းပြ အားမကိုးပါနဲ့ ။invest in yourself ဆိုတဲ့စကားလေးကို သတိရပါ။ ကိုယ့်ကျန်းမာရေး
အတွက် ကိုယ်တိုင် ဗဟုသုတပြည့်နေမှ အိုကေ ပါလိမ့်မယ်။ ယနေ့ အင်တာနက် ပေါ်မှာ လိုအပ်သမျှ
အသိပညာ ရှာဖွေ နိုင်ပါပြီ။ Knowledge is power ဆိုသလို ပါပဲ။ ကစားသမား တစ်ယောက် ချင်းစီရဲ့ 
အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးတက် မြင့်မားလာလေလေ အရည်အချင်း ရှိနည်းပြ လူတန်းစား တစ်ရပ်
ပေါ်ပေါက်လာ လေလေပါပဲ။အဲလို ဆိုရင်တော့ မြန်မာ့ ဖစ်တနက်စ် လောက အဆင့်အတန်း မြင့်လာဖို့ 
မျှော်လင့် လို့ ရပါပြီ။ အဲဒါဆိုရင် ၊
-ကာဗိုဟိုက် ဒရိတ်တွေက ဘာလဲ၊
-ခါးဘေးက အဆီတွေ ကခါးလှည့်ရုံနဲ့ ကျတယ် ဆိုတဲ့ ယုံတမ်း စကားတွေ
-ရေသောက် ရင်ဝလာတယ် ဆိုတဲ့ ယုံတမ်းစကားတွေ
-ညခြောက်နာရီ ကျော်လို့ အစာမစားရင် ကိုယ်အလေးချိန် ချနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ယုံတမ်းစကားတွေ
Auto ပျောက်ကွယ် သွားမှာပါ။
၁၁-အာဟာရ ကိုလည်း ဂရုစိုက်ပါ။
၁၂- အိပ်ရေး ဂရုစိုက်ပါ။
၁၃-ငွေကြေး တတ်နိုင်ပါက သင့်လျော်သည့် ဖြည်စွက်အာဟာရ(supplements )များကို နည်းပြနှင့် တိုင်ပင်
ပြီးသုံးပါ။တိုင်ပင် ပြီးအသုံးပြုသည် ဟုဆိုရာဝယ် ဂျင်မ်မှာ ဒီဆေးရောင်းလို့ ဒါသောက်ပါ ဆိုတဲ့ အိုင်ဒီယာ လမ်းညွှန်ချက် မျိုးကို လက်မခံပါနဲ့ ။ မိမိရည်မှန်းချက် နဲ့မိမိသုံးနိုင်တဲ့ ငွေအနေအထား အပေါ်မူတည်ပြီး
သင့်လျော်တဲ့ ဆေးသုံးရန် အတိအကျ လမ်းညွှန်ခိုင်းပါ။
၁၄-မိမိလက်ရှိ အနေအထားကို မိမိ၏ နည်းပြထက် အခြားမည်သူမျှ ပိုမသိနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် မိမိနည်းပြကို
အာဟာရ စားသောက်မှု ပုံစံကို အကြမ်းဖျင်းရေးဆွဲ ခိုင်းပါ။ယေဘူယျ အသားစားပါ။ငါးစားပါ။ကြက်ဥစားပါ
ကန်ဇွန်းဥစားပါ။စတဲ့အကြံပေးချက် မျိုးတွေလောက်နဲ့ မတင်းတိမ်ပါနဲ့ ။အဲဒီလောက်က အွန်လိုင်းမှာ
အလွယ်တကူ ရှာနိုင်လို့ ပါ။ ကစာသမား တစ်ယောက် ချင်းစီအတွက် နည်းပြမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
၁၅-နည်းပြ လမ်းညွှန်သမျှကို တသွေမတိမ်း တလေးတစား ပြုလုပ်ပါ။ နည်းပြက ပြောချင်တာပြော
ကိုယ်ကလည်း လုပ်ချင်တာ လုပ်ပါက ရလာဒ်ထူးမည် မဟုတ်ပါ။လုပ်ချင်တာ လုပ်ပြီး ရလာဒ်မပြောင်း
လဲပါက နည်းပြကို အပြစ်မဆိုပါနဲ့ ။မိမိလုပ်ရပ်ကို မိမိတာဝန်ယူပါ။
၁၇-မိမိ life style ကို မိမိဝါသနာနှင့် တတ်နိုင်သမျှ နီးစပ်အောင် ချိန်ညှိပါ။တခုရွေးချယ် ရမယ်ဆိုရင်တော့
၀ါသနာထက် ဘ၀ကို ဦးစားပေးပါ။လောကမှာ Six Packs ထက်အရေး ကြီးတာတွေ အများကြီးဆိုတာ ညီငယ်
တို့ ကိုသိစေချင်ပါတယ်။ဘယ်အနေအထား ဘယ်ဘ၀ မျိုးမှာပဲ ရှင်သန် ကျင်လည်ရသည် ဖြစ်စေ ကျန်းမာရေး
သည် အဓိကပါ။ကျန်းမာဖို့ က သိပ်မခက်ပါဘူး။ရေများများ သောက်ပါ။အိပ်ရေး၀၀အိပ်ပါ။ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား
နေပါ။လမ်းများများ လျောက်ပါ။ အသောက်အစား အပျော်အပါး တတ်နိုင်သမျှ လျော့ချပါ။ဒီလောက်ဆို အိုကေ
လူတိုင်း ဆန္ဒနှင့် ဘ၀ တစ်ထပ်တည်း ကျပြီး ကျန်းမာ သန်စွမ်းပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုလျက်-
နို့ သောက်တာ ကောင်းလား?
ဒီအမေးကို ခလေးတောင် ဖြေတတ်နေ တာကို muscle professor က အဆန်းလုပ် မေးနေတယ်လို့ မထင်
စေချင်ပါ။အခုဖတ် လိုက်ရတဲ့ research လေးတွေကို မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖတ်ရတာတွေက shock ဖြစ်
စေလို့ ပါ။ကျွန်တော်ဟာ နို့ ကို အသေအလဲ ကြိုက်နှစ်သက် သူတစ်ယောက်မို့ ပါ။ကျွန်တော် သိပ်ကြိုက်တဲ့
အာနိုးကလည်း ခနာကိုယ် ကြီးထွားဖို့ နို့ များများ သောက်ခိုင်းပါတယ်။ဟိုးအရင် က squat and milk mass program ဆိုတာတောင် ပေါ်လိုက်သေးတယ်ဗျာ။သမ္မတကြီးကလည်း နို့ သောက်ပါ ပြောတယ်လေဗျာ။
နို့ သောက်ခြင်းက အမျိုးသားတွေ အတွက် အပြည့်အ၀ မကောင်းပါဘူးတဲ့ဗျာ။
နို့ သောက်ခြင်းက အရိုးအတွက် ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီများက
ရိုက်ချိုးလိုက်ပါပြီ။ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်မှာ နို့ များများသောက်တဲ့ အမျိုးသားတွေ ဟာ အသက်အရွယ်
ရလာချိန်မှာ တင်ပါးဆုံရိုးကျိုး နိုင်ချေများတယ် လို့ တင်ပြလာပါတယ်။
ကိုးကား-(Feskanich D, Bischoff-Ferrari HA, Frazier AL, Willett WC. Milk ConsumptionDuring Teenage Years and Risk of Hip Fractures in Older Adults. JAMA
Pediatr.2013 Nov 18.)
နောက်ထပ် သုတေသန တစ်ခုကလည်း အမျိုးသားတွေ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်မှာ နို့ သောက်တာ
များရင် အရွယ်ရလာရင် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများလာပါတယ်တဲ့ ဗျာ။
ကိုးကား- Torfadottir JE. Milk intake in early life and risk of advanced prostate cancer. Am J Epidemiol. 2012 Jan 15;175(2):144-53. Epub 2011 Dec 20.
သုတေသန လေးတွေကို တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မည်သူ့ ကိုမှ ရည်ရွယ် တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိပါ။
အကယ်၍ သင်ဟာ နို့ သောက်တာ ကောင်းတယ်လို့ ယူဆနေရင် သင့်ရဲ့ post workout မှာ
ချော့ကလက် နို့ ကိုသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်လို့ သုတေသီများက ထပ်မံ တင်ပြထားပါတယ်။
Body Transformation လုပ်တော့မယ် ဆိုရင်-
မိမိရဲ့ လက်ရှိ ခနာကိုယ် ကိုပြောင်းလဲ တော့မယ် စိတ်ကူးရင် ဒီအကြံပေးချက် လေးတွေ လိုက်နာဖို့ လိုပါတယ်။
၁-ကစားချိန် တစ်ချိန်တိုင်းဟာ သင်အတွက် နောက်ထပ် အစားမရ နိုင်တဲ့ အတွက် ကစားချိန် တစ်ချိန်ချင်းကို
အထူး တန်ဖိုးထားပြီး ဖိဖိစီးစီး ကစားပါ။
၂-ခနာကိုယ်ရဲ့ လက်ခံနိုင်စွမ်း ကိုတသမတ်တည်း မထားပါနဲ့ ။အမြဲတမ်း အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ပြီး သင့်ခနာကိုယ် ကိုလှုံဆော်နေပါ။ဥပမာ-လေ့ကျင့်ခန်း ရွေးချယ်မှု၊ အလေး၊ အကြိမ်၊အကျော့၊ တစ်ကျော့
နှင့် တကျော့ကြား နားချိန် စသည်တို့ ကို ကစားချိန် သုံးကြိမ်မှ ခြောက်ကြိမ် ကစားပြီး တိုင်းအပြောင်း
အလဲ လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါ။ ကြွက်သား အုပ်စုကို တစ်ကြိမ်လျင် အကြိမ်မည်မျှ ကစားရမည် ဆိုသည့်
အချက်ကိုတော့ ကစားသမား တစ်ဦးချင်းစီ အပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲ ရှိပါသည်။
၃-တစ်ပါတ်ကို ကစားချိန် လေးချိန် လောက်တော့ ကစားဖြစ်အောင် ကစားပါ။ အဆီချလို၍ တစ်ပါတ်လျင်
ကစားချိန်ကို လေးချိန်ထက် ပိုကစားလိုပါက လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခု၏ ပြင်းအား ကိုလျော့ပါ။
၄-ခနာကိုယ် ပြောင်းလဲ လိုသူတို့ မှားတတ်သည့် အချက် တစ်ခုမှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကို ပုံမှန်မစားခြင်း
ပင်ဖြစ်သည်။တကယ် ကစားလျင် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် စားဖို့ မကြောက်ပါနှင့်။ဒါပေမဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် အမျိုး
အစားကိုတော့ စနစ်တကျ ရွေးချယ်ပါ။
၅-ငါးရံ နှစ်ကောင် တပြိုင်တည်း မဖမ်းပါနဲ့ ဗျို့ ။တချို့ ညီငယ်တွေ ကအဆီလည်းချချင် မာဆယ်လည်း တက်ချင် ကြတယ်။အဲဒါက တကယ်တော့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အလုပ်ပါ။အကယ်၍ သင်ဟာ စတီးရွိုက်သုံးမယ်ဆို
ရင်တော့ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။သာမန်လူအနေနဲ့ ကတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စကစားတဲ့ လူသစ်တွေ ရယ် အချိန်တွေ အကြာကြီး နားထားပြီး ပြန်ကစားတဲ့ သူတွေရယ် ကတေ့ာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် တကယ်ဖြစ်ချင်ရင် တကယ်လုပ် အဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
သွယ်လျ ကျစ်လစ် နေနိုင်စွမ်း ရှိသလို၊ အချို့ ကတော့ မကြာခင် မှာပဲ ကိုယ်အလေးချိန် ပြန်တက်လာတာ ကို
မြင်တွေ့ နေကြရ ပါတယ်။ဘာတွေမှားလို့ ဘာတွေမှန်တယ် ဆိုတာကို ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် နဲ့ ထောက်ပြလို့ မရ
နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ fitness လေ့ကျင့်ရင်း အဆီချဖို့ ရည်ရွယ်တယ် ဆိုရင်တော့ သင်သိလိုတာ တွေကို
စာအုပ် တစ်အုပ်တည်းနဲ့သိအောင် ညွှန်ကြားပေးနိုင်တဲ့ စာအုပ်ကို ကျွန်တော် ရေးပေးထားပါတယ်။
အဲဒီ စာအုပ်နာမည်က ***သိပံနည်းကျ အဆီချနည်းများ***ပါ။ဤလင့်ခ် တွင် အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်
ရယူနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီစာအုပ် တစ်အုပ်လုံးကို ဖတ်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ပါက ယေဘူယျ အချက်သုံးချက်
ကိုညွှန်ပြ ပေးလိုက်ပါမည်။ လူသာမန်တိုင်း နားလည် သဘော ပေါက်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။